Wix को साथ एक साइट निर्माण - यो तपाइँको लागि सही छ? 💻 - Ne gerekir?
Wix को साथ एक साइट निर्माण - यो तपाइँको लागि सही छ? 💻
Wix कस्तो छ? Wix राम्रो? म Wix मा कसरी साइट सेट अप गर्ने?
Negerekir.com यो Wix को साथ सिर्जना गरिएको थियो। तत्काल नडराउनुहोस्। हामीले Wix बाट WordPress मा किन परिवर्तन गर्‍यौं? यस प्रश्नको हाम्रो जवाफ राम्रोसँग पढ्नुहोस्। किनकि यो तपाईंको साइटको लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय हुनेछ। यस व्यवसायमा संलग्न सबैजनाको Wix को नराम्रो दृष्टिकोण छ। तर के अनुसार?
के यो तपाईलाई उपयुक्त छ?
तपाईंको प्रोजेक्ट केमा निर्भर गर्दै, तपाईंले तपाईंको लागि सही सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली फेला पार्नुपर्छ। हामीले मूल रूपमा Wix मा negerekir.com स्थापना गर्नुभयो। हाम्रो SEO निर्बाध र पेशेवर हुनको लागि क्रममा, WordPress अधिक स्वतन्त्र थियो। थप रूपमा, हामी विक्सलाई केहि कारणहरूको लागि छोड्दछौं जस्तो कि एएमपी डिजाइनलाई छुन नमिल्ने गरी, हाम्रो विज्ञापनहरू एएमपीमा देखाउन सकिँदैन, बहु-भाषा विकल्प ब्लग प्लगइनहरूसँग उपयुक्त छैन।
कुन परियोजनाहरू उपयुक्त छन्?
जो एक साइट चाहन्छन् जुन सस्तो मूल्यको साथ १ दिनमा सिर्जना गरिनेछ, कोड बिना, Wix छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। यो प्रणाली हो जुन हामी निश्चित रूपमा पदोन्नति र केही पृष्ठहरूको साथ पोर्टफोलियो साइटहरूमा प्राथमिकता दिन्छौं। तिनीहरू जो ई-वाणिज्य र ब्लग सिर्जना गर्न चाहान्छन् तुलना र फेरि निर्णय गर्नु पर्छ। मेरो लक्षित दर्शकहरु के हो? मेरो आय कहाँबाट आउँछ? मेरो बजेट के हो? म कहाँ जान चाहन्छु? किनभने जब तपाइँ Wix बाट अर्को प्रणालीमा स्विच गर्नुहुन्छ, यो वास्तवमै चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
Wix धेरै सुधार भएको छ
मैले धेरै स्थानमा हेरेको छु कि यसलाई एमेच्यर्सका लागि सजिलै तान्ने र ड्रप टेक्निकको साथ साइट सिर्जना गर्न सेवा भन्ने हो।
हेर्नुहोस् कसरी सजिलो र छिटो यो काम लाई एकै समयमा एक गुणात्मक कार्यमा परिवर्तन गर्दछ। यदि त्यहाँ सेवा छ जुन तपाईंलाई तपाईंको कार्य एक साधारण तरिकाले गर्न अनुमति दिन्छ र गुणस्तरमा सम्झौता गर्दैन र ठोस आधार छ भने, एमेचर्सका अनुसार यसो भन्न तपाईंलाई कस्तो लाग्छ कि उनीहरूले सबै काम सजिलो बनाएको हुनाले?
कोडको धेरै जसो Wix मा छोड्नाले तपाईंको समय र तपाईंको उत्साह दुवैलाई योगदान दिनेछ यसलाई कोड बनाउने क्रममा यसलाई अझै व्यावसायिक बनाउनको लागि।
लगानीकर्ताको आँखा Wix मा छन्
यदि हामी गुगलमा "Wix सेयर" को लागी बढ्दो खोजीमा हेर्छौं, लगानीकर्ताहरुको Wix मा नजर हुन्छ।
हामी Wix मा ट्यूटोरियलहरू तयार गर्दैछौं, तयार हुनुहोस्!
कुनै खुला स्रोत छैन, त्यहाँ सुरक्षा छ
विक्समा कुनै खुला स्रोत छैन। यो वास्तवमै समस्यापूर्ण मुद्दा हो। हामीले भनेझैं तपाईले आफ्नो परियोजना अनुसार छनौट गर्नु पर्छ। खुला स्रोतको अभावले तपाईंको सुरक्षालाई निर्दोष बनाउँछ। त्यसोभए यस अवस्थामा यस्तो जोड छ।
तपाईले तयार गर्नुभएको साइटको कोडहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। तर त्यहाँ सेक्शनहरू छन् जुन तपाईं सजिलैसँग कोडहरूमा थप्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंलाई एसईओ, मेटा र स्किमा कोड थप्न अनुमति दिन्छ।
थप रूपमा, तपाईं कोर्विड (यसको नयाँ नाम वेलोको साथ) को साथ रचनात्मक संयन्त्रहरू महसुस गर्न सक्नुहुनेछ, कोडको भाषा Wix द्वारा विशेष रूपमा विकसित गरिएको।
Wix मा Velo
Wix को सजिलो पुरानो नामको साथ तपाईले Corvid भाषाका साथ बिभिन्न कार्यहरू पनि हस्ताक्षर गर्न सक्नुहुनेछ। हामी यस विषयमा विस्तृत पाठ्यक्रम सामग्रीहरू तयार गर्दैछौं। Velo भाषाले तपाईंलाई Velo भाषा भएको सवारी साधन उत्पादन गर्न अनुमति दिन्छ जहाँ ड्र्याग-एण्ड-ड्रप स्केचेस र दिइएको डिजाइन उपकरण अपर्याप्त छन्।
त्यसैले त्यहाँ सीमा छैन, जारी राख्नुहोस्! हो, कोड भाषा सिक्न अलि अनौंठो हुन्छ जुन तपाईं Wix मा मात्र प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं अनुसन्धान गर्न सक्नुहुनेछ जब त्यहाँ कुनै संरचना छ जुन तपाईं सिक्नको सट्टा सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ। तपाइँ Velo विशेषज्ञहरु र सदस्यहरुबाट सहयोग लिन सक्नुहुन्छ।
तपाइँका समस्याहरूको समाधान खोज्नुहोस्
तपाइँ तपाइँका सबै समस्याहरूको उत्तरहरू Wix को उन्नत छलफल र साझेदारी फोरमहरू, ब्लगहरू र ट्यूटोरियलमा पाउन सक्नुहुन्छ। यस प्लेटफर्ममा धेरै प्रश्नहरू छलफल गरिएको र सुल्झाइएको छ, छिटो उत्तरहरू भेट्टाउन सम्भव छ।
तपाईंले हेर्नुभयो, तपाईंको दिमागमा यो प्रश्न पहिले छलफल गरिएको छैन, तपाईं तुरुन्त पोस्ट गरेर १- immediately घण्टा भित्र हजारौं सदस्यहरूको मद्दत लिन सक्नुहुन्छ।
Wix फोरम को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
Wix ब्लग को लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
Wix को फाइदाहरु
जब तपाईं प्याकेज खरीद गर्नुहुन्छ डोमेन खरीद नि: शुल्क हुन्छ। (com, नेट, org र अन्य लोकप्रिय विस्तारहरू)
प्याकेजमा तपाईले होस्टिंग प्राप्त गर्नुहुनेछ, तपाईले यसलाई छुट्टाछुट्टै खरीद गर्नु पर्दैन।
गति सेवा (ब्यान्डविथ) र ई-वाणिज्य सुविधा प्याकेजको आधारमा चयन गर्न सकिन्छ।
सेवा उच्चतम गुणवत्ता ड्र्याग र ड्रप टेक्निकको साथ Wix मा छ।
विक्ससँग ब्लग छ जहाँ तपाईले कसरी सोच्न सक्नुहुन्छ सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिइन्छ, र एउटा फोरम जहाँ तपाई समस्या र विचारहरूको उत्तर पाउन सक्नुहुन्छ एकदम छोटो समयमा।
मोबाइल अनुप्रयोगको साथ, तपाईं फोनबाट तपाईंको धेरै काम गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं खाली टेम्प्लेट खोल्नुहुन्छ भने पनि, तपाईं पोष्ट सिर्जना गर्न जस्तै दुई वा तीन आन्दोलनहरूको साथ साइट डिजाइनहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै, यो आवश्यक पनि हुने छैन, किनकि तपाईले आफ्नो विषयलाई छोटकरीमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको जानकारी सजिलैसँग भर्न को लागी प्रत्येक विषयको लागि पेशेवर रूपले तयार गरिएको गुणवत्ता टेम्प्लेटहरू भर्नुहोस्।
तपाइँ आफ्नो डोमेन जडान नगरेसम्म तपाइँले चाहानु हुने टेम्प्लेटहरू कोशिस गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाइँको साइट Wix द्वारा प्रदान गरिएको Wix एक्सटेन्सन डोमेनको साथ प्रकाशित गर्नुहोस्।
तपाईं दुबै भौतिक र डिजिटल उत्पादनहरू / सेवाहरू तपाईंको ई-कमर्स मार्केटमा बेच्न सक्नुहुनेछ।
स्टोरमा Wix प्लगइनहरू र अनुप्रयोगहरू हेर्न Wix को लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
तपाइँ Wix मोबाइल अनुप्रयोगमा के गर्न सक्नुहुन्छ
मार्केटिंग अभियानहरू सिर्जना गर्दै
कार्यहरू र अनुस्मारकहरू थप्दै
भुक्तान हेर्न सक्षम हुनु
सदस्यहरू र कार्यहरूको बारेमा टिप्पणीहरू थप्नुहोस्
सदस्य कल गर्न र सन्देशहरू पठाउन सक्षम हुनु
सदस्यहरु नियुक्त गर्न सक्षम हुनु
सदस्यहरूलाई ब्याज प्रदान गर्दै
साइट समूहहरू प्रबन्ध गर्दै
साइट विश्लेषण र रिपोर्टहरू पहुँच गर्दै
ब्रान्डि and र मार्केटिंग कार्यहरू गर्न सक्षम हुन
सामाजिक सेयरहरूको लागि डिजाईन गर्दै
इ-मेल मार्केटिंगको लागि डिजाइन गर्न सक्षम हुन
एक मोबाइल वेब ब्यानर बनाउने
एक भिडियो निर्माता बनाउन सक्षम हुँदै
लोगो सिर्जना गर्दै
मोबाइल घोषणाहरू जाँच गर्दै
मिडिया प्रबन्धकमा पुग्नुहोस्
व्यापार सेटिंग्स पहुँच गर्दै
मोबाइल सेटअप चरणहरू बनाउँदै
भूमिका र शक्तिहरू विनियमन गर्दै
उत्पादनहरूमा ट्याग तोक्दै
उत्पादनहरू सम्पादन र थप गर्दै
नियुक्तिहरू सिर्जना र सम्पादन गर्दै
घटनाहरू सिर्जना र आयोजना गर्दै
सशुल्क सदस्यताहरू सिर्जना र सम्पादन गर्दै
फोरममा पोष्टिंग र सम्पादन गर्दै
एक प्रशिक्षण कार्यक्रम सिर्जना र आयोजना गर्दै
ब्लग पोष्ट गर्दै र सम्पादन गर्दै
Wix मा कस्तो खालका साइटहरू बनाउन सकिन्छ वास्तवमा, कुनै पनि प्रकारको साइट बनाउन सकिन्छ, तर पहिलो विचारहरू दिमागमा आउने लेखौं;
भोजनालय र खाना
पोर्टफोलियो र CV
यदि हामी अझ विस्तृत रूपमा हेर्छौं;
एन्टिक शप वा एन्टिक शप
स्कूल वा शिक्षण प्रशिक्षण
संघ, संगठन वा समाजहरू
घटनाहरू, सम्मेलनहरू, दलहरू
प्रत्यक्ष प्रसारण घटनाहरू
डिजिटल सेवा वा उत्पादनहरू
र तपाइँ हजारौं पेशा र विषयहरूमा हजारौं साइटहरू खोल्न सक्नुहुन्छ।
Wix को नुकसान
यसले खुला कोड साझा गर्दैन।
त्यहाँ कुनै टर्की समर्थन टोली छैन।
Wix समर्थन टीम
कुन भाषामा Wix समर्थन प्रदान गर्दछ?
हाम्रो कलब्याक सेवा २//7 अंग्रेजीमा उपलब्ध छ,
फ्रेन्चमा, 9.00 .००-१-18.00.०० बीच (GMT + २) सोमबार देखि शुक्रवार सम्म,
इटालेलीमा, 8.00.००-१-1700०० (GMT + १) बीच सोमबार देखि शुक्रवार सम्म,
पोर्तुगालीमा 5.00..००-१-17.०० (PST) बीच सोमबारदेखि शुक्रवार सम्म,
यो स्प्यानिशमा उपलब्ध छ, सोमबारदेखि शुक्रवार बिहान :3.00:०० बिहान :20.00 बजेसम्म (EST)।
नि: शुल्क विक्स
तपाइँ Wix एक्स्टेन्शन डोमेनमार्फत तपाइँको साइटलाई नि: शुल्कका लागि खोल्न सक्नुहुन्छ, धेरै सुविधाहरू प्रयोग गरेर, तपाइँको आफ्नै डोमेनमा जडान नगरी। तपाइँ तपाइँको सम्पूर्ण साइट नि: शुल्क सेट अप गर्न सक्नुहुनेछ, भुक्तान विधि थप गर्न।
यदि तपाईं अझै पनि प्याकेजमा रहन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं ढोकामा भुक्तानी विधि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तर तपाईं पहिले नै कडा उद्योगमा हुनुहुन्छ। यो तपाइँको साइट मा Wix विज्ञापन छ एक उपद्रव हो। सबैभन्दा ठूलो समस्या यो हो कि कोहीले पनि साइटबाट किनबेच गर्न चाहँदैनन् जसमा भुक्तान विधि छैन।
त्यहाँ ई-वाणिज्य साइटहरू हुन सक्दछ जुन कुनै समस्या बिना निःशुल्क प्याकेजको फाइदा लिन सक्दछ। उदाहरण को लागी, यो ती मानिसहरुका लागि उपयोगी हुन सक्दछ जो आफ्नो सेवाहरुलाई उनीहरुको वरिपरिको वरिपरिको क्षेत्रमा प्रचार गर्न चाहान्छन्।
Wix साइट प्याकेज मूल्य र सुविधाहरू
तपाइँसँग १ package दिन भित्र तपाइँको प्याकेज फिर्ता गर्ने अधिकार छ, जुन तपाइँले खरीद गर्नुभएको पहिलो प्याकेजको लागि मान्य छ।
परम Wix प्याकेज
हामी यस प्याकेजलाई सिफारिस गर्दैनौं।
एक महिना 15 TRY
मासिक १० TL को साथ वार्षिक £ 120.00 भ्याटको साथ £ 141.60
तपाइँ ब्यान्डविथको १ जीबीको हकदार हुनेछ। (साइटमा कोड र छविहरूको गति डाउनलोड गर्नुहोस्)
तपाईंसँग MB०० MB भण्डारण ठाउँ हुनेछ।
तपाईं आफ्नो डोमेन लिंक गर्न सक्नुहुन्छ।
Wix विज्ञापनहरू टाढा लिने छैन।
व्यक्तिगत प्रयोगको लागि मानक Wix प्याकेज
एक महिना £ 23
मासिक १..17.50० TL को साथ वार्षिक £ 210 भ्याटको साथ 247.80 TRY
तपाइँ ब्यान्डविथको २ जीबीको हकदार हुनेछ। (साइटमा कोड र छविहरूको गति डाउनलोड गर्नुहोस्)
तपाईंसँग GB जीबी भण्डारण हुनेछ।
तपाइँसँग तपाइँको डोमेन लि link्क गर्ने अधिकार हुनेछ।
तपाइँ तपाइँको साइट बाट Wix विज्ञापन हटाउन सक्नुहुन्छ।
नि: शुल्क १-वर्ष डोमेन कूपन उपहारको रूपमा दिइनेछ।
तपाईंसँग minutes० मिनेट भिडियो अपलोड गर्ने अधिकार छ।
एक $ 75 विज्ञापन वाउचर उपहार स्वरूप दिइनेछ।
सबैभन्दा लोकप्रिय, असीमित उद्यमीहरू र फ्रीलांसर्सहरूको लागि विक्स प्याकेज
यो प्याकेज लगातार आधा बिक्रीमा गइरहेको छ, प्रतीक्षा गर्नुहोस्
हामी यस प्याकेजलाई सिफारिश गर्दछौं किनभने, लगातार अभियानको साथ, प्याकेज मूल्य आधाले घटाइन्छ र यसको सुविधाहरू अन्य प्याकेजहरूको तुलनामा धेरै फाइदाजनक हुन्छन्।
एक महिना £ 33
मासिक १..17.50० TL को साथ वार्षिक 312 TRY भ्याटको साथ 368.16 TRY
मासिक स्थायी %०% छुट संग १० TL को साथ वार्षिक £ 156 भ्याटको साथ 184.08 TRY
तपाईंसँग असीमित ब्यान्डविथ अधिकार हुनेछ। (साइटमा कोड र छविहरूको गति डाउनलोड गर्नुहोस्)
तपाईंसँग १ घण्टाको लागि भिडियोहरू अपलोड गर्ने अधिकार हुनेछ।
Traffic worth worth मूल्यको कूपनलाई साइट ट्राफिक बढावा दिन उपहार दिइनेछ।
$ Worth० को मूल्यको कुपन भिजिटर र ग्राहक विश्लेषणका लागि उपहार स्वरूप दिइनेछ।
VIP उन्नत फीचर Wix प्याकेज
एक महिना £ 63
मासिक १० TL को साथ वार्षिक 600.00 TRY भ्याटको साथ £ 708.00
स्थायी %०% छुट संग मासिक १० TL को साथ वार्षिक 300 TRY भ्याटको साथ £ 354
तपाईंलाई $ 50 कुपन दिइनेछ जसको साथ तपाईं पेशेवर लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईंको सबै सामाजिक मिडिया च्यानलहरूको लागि, तपाईं आफ्नो your 50 लोगोको 40० भन्दा बढी आकारहरू प्रयोग गर्न तयार हुनुहुनेछ।
तपाईं प्राथमिकता समर्थनको हकदार हुनेछन्।
तपाईंसँग VIP समर्थन छ।
ई वाणिज्य र व्यापार प्याकेज मूल्य र Wix मा सुविधाहरू
आधारभूत व्यापार Wix प्याकेज जहाँ तपाईं अनलाइन भुक्तानी स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ
एक महिना 44 TRY
मासिक १..35० TL को साथ वार्षिक 420.00 TRY भ्याटको साथ £ 495.60
स्थायी %०% छुट संग मासिक १..17,5० TL को साथ वार्षिक £ 210 भ्याटको साथ £ 247,80
तपाईं अनलाइन भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
तपाईं बिक्री विश्लेषण र रिपोर्टबाट फाइदा लिन सक्षम हुनुहुनेछ।
तपाईंको व्यापार बढाउन सब भन्दा लोकप्रिय असीमित व्यापार Wix प्याकेज
एक महिना 60 TRY
मासिक १..50० TL को साथ वार्षिक 600.00 TRY भ्याटको साथ £ 495.60
स्थायी %०% छुट संग मासिक १० TL को साथ वार्षिक £ 300 भ्याटको साथ £ 354
तपाईंको ईन्टरनेटमा व्यावसायिक ई-वाणिज्य सुविधाहरू, सदस्यताहरू, स्वचालित बिक्री करहरू, शपिंग प्लेटफर्मको साथ एकीकरण र अधिकको साथ तपाईंको व्यापार बढाउनुहोस्।
सबैभन्दा व्यापक सुविधाहरूको साथ VIP व्यवसाय Wix प्याकेज
यदि तपाईं ठूलो कम्पनी हुनुहुन्छ भने हामी यो प्याकेजलाई सिफारिस गर्छौं किनकि बारम्बार अभियानको साथ प्याकेज मूल्य आधा काटिन्छ र यसका सुविधाहरू अन्य प्याकेजहरूको तुलनामा धेरै फाइदाजनक हुन्छन्।
एक महिना 84 TRY
मासिक १० TL को साथ वार्षिक 876.00 TRY भ्याटको साथ £ 1,033.68
स्थायी %०% छुट संग मासिक १० TL को साथ वार्षिक £ 438 भ्याटको साथ £ 516,84
तपाईंसँग असीमित भिडियो अपलोडहरू हुनेछ।
म दृश्य दृश्य संचार स्नातक हुँ। Ne Gerekirम यसको संस्थापक र प्रबन्धक हुँ।